Momba anay - Dongguan kinda Filtration Equipment Co., Ltd.
Dongguan somary filtration Equipment Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2013, Donguan Kinda Filtration Equipment Co., Ltd. dia orinasa hi-tech manokana amin'ny R&D, ny famokarana ary ny fivarotana ny membrane filtration sy ny vokatra mifandraika amin'izany. Mifanaraka amin'ny hevitra hoe "teboka fanombohana avo, teknolojia avo lenta ary fenitra avo lenta", ampahafantarinay mavitrika, handevonana ary handraoka ireo haitao fandrindrana sy fisarahana mandroso indrindra ao an-trano sy any ivelany, hamolavola fitaovana vaovao, teknolojia ary fizotran'ny firenena manana fahaleovan-tena marobe zon'ny fananana ara-tsaina ary lasa mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Indostrian'ny Membrane any Sina.
Ny akoranay dia omen'ny mpamatsy entana fanta-daza anatiny sy ampitan-dranomasina, izay efa nofidina sy notsapaina taloha hatrany. Ny vokatra membrane ampiharina amin'ny biomedicine sy sakafo sy zava-pisotro dia eken'ny FDA ary mifanaraka amin'ny fepetra fitiliana fiarovana amin'ny USP farany misy ifandraisany amin'ny fiverenan'ny biolojika VI-121C ny vatan'ny olombelona amin'ny plastika. Ny fizotry ny famokarana dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra fitantanana kalitao ISO9001 ary ampiharina amin'ny mpandalina mandroso mba hahitana ny fifehezana kalitao anatiny izay henjana kokoa noho ny fanateran'ny orinasa.
Ny vokatrao lehibe indrindra dia misy sivana membrane bitika, sivana rivotra ary sivana ranon-javatra ary ampiharina betsaka amin'ny fivarotam-panafody bio, indostrian'ny simika, elektronika, fiarovana ny tontolo iainana, angovo ary andrana ara-tsiansa amin'ny fanadiovana, fanamorana, fisarahana, fifantohana, fanatsarana, fanehoan-kevitry ny catalytic, ary ny biolojika amin'ny gazy sy ranoka. Raha ampitahaina amin'ny vokatra membrane mahazatra izay natao ho fanadiovana, fisarahana ary fizotran'ny fanehoan-kevitra, ireo vokatra ireo dia miavaka amin'ny fahatsorana, fahombiazana, fahamendrehana, vidiny ambany, fisakaizana amin'ny tontolo iainana, famoronana, ary fampiasana angovo mahomby, mampiseho sisiny mifaninana.
Nandritra ny folo taona lasa, ny olona Kinda dia mailo hatrany ary mitandrina, tsy mahay mandanjalanja ary manome fanazavana momba ny fitantanana an'i Kinda. Noho ny fikirizantsika, tsy vitan'ny mpanjifa taloha ihany no mahazo dera am-bava fa hahazo fankatoavana mitohy avy amin'ny mpanjifa vaovao ihany koa. Milamina sy mandroso ny orinasanay, miroborobo isan'andro. Amin'izao fotoana izao dia manana sampana miorina manerana an'i Sina izahay, ao anatin'izany ny Xiamen, Kunshan, Chengdu, ary Hong Kong, manompo ny mpanjifa eran'izao tontolo izao. Miorina amin'ny eritreritra momba ny fanompoana sy ny traikefa an-taonany, ary miaraka amin'ny tahan'ny fampiroboroboana ny vidiny sy ny serivisy fanatsarana aorinan'ny varotra, azo antoka fa ho mpiara-miasa tsara aminao izahay!